प्रहरी तपाइको हो, अपराध नियन्त्रणमा सहयोग गर्नुहोस चाँडै नतिजा दिनेछौँ : एस पी अधिकारी
मङ्गलबार, साउन १२, २०७८ मा प्रकाशित
धनगढी : कैलाली जिल्ला शान्ती सुरक्षाका हिसाबले अन्य जिल्लाको तुलनामा सम्बेदनशिल जिल्ला मानिन्छ । जिल्लामा लागु औषध प्रयोगकर्ताको बिगबिगि संगै अपराधिक क्रियाकलाप पनि निकै बढी हुन्छन् । यस जिल्लालाई शुरक्षा निकायलेपनि गम्भिरताका साथ हेरेको हुन्छ । कैलालीमा शुरक्षा निकायका प्रमुख खटाउने बिषयमापनि प्रहरी महानिरिक्षककै चासो हुन्छ । जिल्लामा हाल नयाँ प्रहरी प्रमुख बिश्व अधिकारी आएका छन् । कैलाली जिल्ला प्रहरी प्रमुखको कार्यभार सम्हाले संगै उनले बनाएका योजना र जिल्लाको शान्ती शुरक्षाका बिषयमा केन्द्रित रहेर प्रहरी प्रमुख अधिकारी संग स्टेट सेभन अनलाइनका सह–सम्पादक दिनेश बिष्टले गरेको कुराकानी
एस पी साप स्वगत छ कैलालीमा
धन्यबाद तपाइ संगै आम कैलालीबासीलाई
कैलाली जिल्लाको प्रहरी प्रमुख भएर आउनुभाछ के बनाउनुभाछ यहाँको शान्ति शुरक्षाका लागी नयाँ योजना ?
सबभन्दा पहिला मलाई यहाँको बारेमा धेरै कुराहरु जानकारी छ धेरै साथीहरु आफन्तहरुबाट सुझाव पनि पाइराखेकै छु । सबैभन्दा बढी हामी लागु औषधको आक्रान्तमा छौँ कोभिडको महामारीमा छौँ कोभिडबाट बच्ने र बचाउने बिषयपनि प्रार्थमिकतामा छ । अपराधको हिसाबले हेर्दा यहाँको युवा पुस्ता लागु औषधको सिकार बनियहेको छ । हामीसंग खुला सिमाना भएका कारण लागु औषधको बिगबिगि बढेको पाइन्छ । त्यस कारण हामीले अहिले यो लाई प्रभावकारी बनाउनका लागी भविश्य बचाउ भन्ने मैले कार्यक्रमनै बनाएर लागिरहेको छु । साथसाथै प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाटपनि यसको प्रभावकारीताका लागी बिभिन्न ठाउँमा अध्यायन भइरहेको छ । ठोस योजनामा जाने गरी तयारी भइरहेको छ ।
अर्कोमा हामीले सेवाग्राहीलाई सन्तुस्ट बनाउनका लागी उहाँहरुको सहजताका लागी सेवाग्राहीको रेकर्ड राख्ने र उहाँहरुले पाएको सेवालाई कसरी लिनुभएको छ, आम जनमानसलाई प्रहरीको ब्यवहार कस्तो भएको छ, राम्रो छ या छैन त्यो समेत खुलाउने गरी एउटा फर्म भर्ने ब्यवस्था मिलाएका छौँ यसले सेवाग्राहीबाट हामीलाई धेरै सुझाव आइरहेका छन् र त्यही अनुसार सेवालाई हामी सुधार गरिरहेका छौँ ।
यस्तै अपराध यो समाजमा हुन्छ अपराध गर्ने मान्छे, अपराधका बारेमा थाहा पाउने मान्छेपनि यहि समाजमा हुन्छ । समाजको सहकार्य र समन्वय बिना प्रहरी यति सफल हुन्न भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर समुदायसंग सहकार्य साँझेदारी गर्ने र अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानको बिषयमानै समुदायको सहयोग होस भन्ने उद्देश्यले हामीले नयाँ कार्यक्रम ‘हाम्रा प्रहरी संग हामी’ पनि ल्याएका छौँ । नागरिकको घर घरमा जाने योजनामा छौँ आम नागरिकले यो प्रहरी हाम्रो हो यो प्रहरी कार्यालय एसपीको नभई हाम्रो हो भन्ने किसिमको भावना जगाउन जरुरी छ । प्रदेश प्रहरी संगै जिल्ला प्रहरीकोपनि यो ऐजेण्डा छ समुदायसंगको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाएर अपराध नियन्त्रणमा हामी बढी केन्द्रित हुन्छौँ । र अँझैपनि योजना बनाइरहेकै छु अन्यायमा परेका बर्गको अभिलेखिकरण गरेर उहाँहरुसंग सम्पर्कमै रहने उहाँहरुको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिइरहने गरी कार्यक्रमपनि बनाइरहेका छौँ । पिडितहरुलाई यसले धेरै सहयोग पुग्ने छ ।
‘हाम्रा प्रहरी संग हामी’ कार्यक्रम समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम जस्तै हो की फरक ?
यो समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत नै हो । जबसम्म यहाँको जनमानसले हामीलाई स्वूकार गर्दैन प्रहरी र नागरिक बिचको एउटा दुरी जुन छ, प्रहरीलाई हेर्ने नजर जुन छ नकारात्मक किसिमको यो चिर्न जरुरी छ । सबै नकारात्मक कुरा मात्रै छैनन धेरै सकारात्मक कुरा छन् यसलाई समाजले सहयोग नगरी सफल मिल्दैन । ‘हाम्रा प्रहरी संग हामी’ भन्नेले एउटा अपनत्वपनि भयो र नागरिक बिना हामी छैनौँ भन्ने कुरापनि गयो । हाम्रो सेवाबाट सन्तुस्टी होस हामीलाई जनताले बिश्वास गरोस अपराध नियन्त्रणमा सहयोग गरोस भनेरै यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।
यसमा कुन कुन कार्यक्रम समाबेस गरिने छ ?
हाम्रो संयन्त्र छदैछ समुदाय साझेदारी कार्यक्रमकै । यसको योजना त्यही हो तर प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई बढी जोड दिइएको हो । कैलाली जिल्लामा ३ वटा समुदाय प्रहरी छन् । यसलाइपनि प्रभावकारी बनाइन्छ । बिद्यालय क्षेत्रबाटैपनि हामीले यो कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउँछौँ ।
बिद्यालय उमेरमा आफ्नै बिकास भइरहेको बिषयसंग अन्तरक्रिया गर्छ । अर्को कुरा बाहिर समाजसंग जोडिएको हुन्छ समाजमा भइरहेको बिषयबाट मनोभाव बनाउँछ प्रहरी वा जुनसुकैका लागी पनि । जिवनलाई सही या गलत बनाउने यो उमेर सबैभन्दा महत्वपुर्ण उमेर हो । त्यसैले बिद्यालय कार्यक्रम बनाएका छौँ । अनी सामाजिक क्षेत्र सञ्चार माध्यम, अन्य उधोग ब्यवसाय? शिक्षक समुह, आमा समुह हुन्छन यी समुदायसंग गएर हाम्रा योजना र हामीसंगको सहकार्यका बिषयमा कुराकानी गर्ने छौँ । यस्तै अहिले त संघिय संरचना छ अहिले पो संघको प्रहरी छ भोली प्रदेश प्रहरी हुँदा त यो प्रहरी यहीँको हुने हो ।
समुदाय साझेदारी कार्यक्रममा स्थानिय तहको भुमिका जसरी उल्लेख्य रहेको छ । स्थानिय तह र प्रदेश सरकारबाट सुदूरपश्चिममा मात्रै प्रहरीको क्षमता अभिबृद्धी देखी श्रोत साधन सहयोगमा एकदमै उल्लेख्य रहेको छ । हामीलाई यसले धेरै सहयोग भइरहेको छ र हाम्रो बिकासका योजना लगेर प्रदेश र स्थानिय सरकारकहाँ गइहेका छौँ । यसरी हामी हाम्रा कार्यक्रमलाई लिएर जान्छौँ । र अपराध नियन्त्रणमा कसले बढी भुमिका खेल्न सक्छ त लागु औषधले नराम्रो अशर गर्छ ज्याननै लिन्छ भन्ने किशिमका शन्देस सुचना दिएरपनि कति मान्छे कुलतबाट जोगिन सक्छन् । यसको मापन गर्नै त समस्या छ त्यो समुदायबाट आएको सुचनाले मैले के गर्न सक्छु भन्ने मापन गर्न सकिन्छ । हाम्रा समुदायमा भएका सुचनाका श्रोतहरुबाट हामीले धेरै काम गर्न सक्छौँ ।
सबै वडाहरुमा समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमकै संरचना संगै त्यहाँभित्र प्रहरीका साथीहरु को को बस्नु हुन्छ अपराध नियन्त्रणमा कोले सहयो गर्न सक्नुहुन्छ सबै ठाउँमा समयमै प्रहरी पुग्न सक्दैन पहाडी क्षेत्रमात कति टाढा प्रहरी चौकी छन् । त्यहाँ पुर्व प्रहरीको साथीहरु भयो भने उहाँहरुबाट हामी सहयोग दिन सक्छौँ ।
तपाइले शुरुमै प्रार्थमिकतामा राख्नुभएको छ, लागु औषध नियन्त्रणलाई बिगतबाटै भनिदै आएको छ लागुऔषध प्रयोगकर्ता र ओसारपोसार गर्ने ब्यक्ती पक्राउ पर्छन बिक्रि गर्ने पक्राउ पर्दैन भनेर के कठिन छ मुख्य नाइके पक्राउ गर्न ?
लागु औषधको मुख्य बिषय भनेको बिक्रेतालाई कटघरामा ल्याउने । हाम्रो बिक्रि हुने भनेको सिमा बाहिर छ भारतिय बजारबाट ल्याएर अधिकासंहरु साना डोज बनाएर ल्याउँछन रे अनी प्रयोगकर्ताहरु केही सिमा क्षेत्रकै बजार गएर सेवन गरेर आउँछन रे । यो कुराका लागीपनि भारतिय सुरक्षा अधिकारीसंग मेरो छलफल छ म उहाँहरुसंगपनि अनुरोध गर्ने छु ।
यहाँ आएर बिक्रि गर्नेका लागी समुदायकै नेटवर्कले काम गर्ने हो प्रहरीका साथीहरु र अन्य समुदायको सहयोगले राम्रै परिणाम दिने छ । लागु औषध सेवन गरेर यहाँ आएकाहरुलाई हामीले समातिराखेकै छौँ । अब चाँही लागु औषध बिक्रि र प्रयोगकर्ता प्रहरीको हातबाट बच्ने छैनन् भन्न चाहान्छु । म अनुरोधपनि गर्छु तपाई सेवनकर्ताहरु प्रहरीले समातिहाल्यो भने सुध्रिनु हुन्छ प्रहरीबाट बच्दै जानुभयो भने तपाइले मृत्युवरणनै गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । लाइफनै समाप्त हुने अवस्था आउँछ ।
सुरक्षा दिने त प्रहरी हो तर सबैभन्दा बढी सुरक्षामा राख्न सक्ने परिवारपनि हो । परिवारपछि समुदाय हो वडामा वडा अध्यक्ष, सदस्यहरु हुनुहुन्छ । परिवारले बच्चाको ध्यान नदिदा बिकराल अवस्था आइरहेको छ, अब वडाले ध्यान नदिए वडामै बिकराल अवस्था आउँछ त्यसैले समुदायलाई बचाउन समुदायकै भुमिका महत्वपुर्ण हुनुपर्छ । घरघरबाट स्थानिय समुदायबाट, जनप्रतिनिधिबाट जागरुक हुनुपर्छ भएका सुचना हामीलाई भन्नुस सकेसम्म पुग्छ प्रहरी ।
कञ्चनपुरको खुला सिमानाबाटपनि प्रवेश भएर कैलाली सम्म लागुऔषध पुग्ने गरेकोपनि हामीले सुचना पाएका छौँ । त्यहाँ कडाइका लागी कञ्चनपुरको एस पी सापसंग सहकार्य गरिरहेका छौँ हाम्रो एक्लैको प्रयास भन्दापनि सबैको प्रयासलेनै हामी सफल हुन्छौँ । प्रहरी एक्लैले चाहेर चाहेजस्तो परिणाम न आउन सक्छ समुदाय, परिवार समेत यसमा सम्मिलित भए हामी चाहे जस्तै परिणाम पाउँछौँ बिग्रेको समुदाय सुधार्न सक्छौँ । आफ्नो बच्चाहरुको बारेमा परिवारले अली ध्यान दिने र सुचना दिने हो भने हामी सुधार गर्न सक्छौँ ।
अहिलेसम्म लागु औषध प्रयोगकर्ता हाम्रो सम्पर्कमा आएकाहरुको अवस्थाका बारेमापनि हामी बुझ्दैछौँ । उहाँहरु कहाँ हुनुहुन्छ के अवस्था छ त्योपनि बुझ्दैछौँ हामी यसलाई न्युनिकरण गरेर सफलता तिर जाने प्रयासमा छौँ ।
प्रदेशका ९ वटै जिल्लाभन्दा बढी घटना कैलालिमा घट्लान यी घटना घट्न नदिने र घटना घटेपछि अपराधिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने जिम्मा तपाइको काँधमा आएको छ, कसरी काम गर्नुहुन्छ ?
राम्रो प्रश्न राख्नुभयो । हाम्रो जतिपनि जनशक्ती छ त्यसको ९९ प्रतिशत अपराध नियन्त्रणमा लागेको छ । प्रहरीले ११ सय भन्दा बढी बिषयमा काम गर्ने गरेको छ । यो महामारीमानि अग्रपक्तींमा प्रहरी रह्यो । पहिलो समुदाय शुरक्षा हो, अपराध नियन्त्रण पहिलो पाटो र अपराध घटिसकेपछि अर्को पाटो हो । सबैभन्दा बढी हाम्रो जनशक्ती घटना हुन नदिनमा केन्द्रित हुन्छ घटना घटिसकेपछि त्यो भन्दा बढी घटनाको अनुसन्धानमा केन्द्रित हुन्छ ।
एउटा प्रहरी डण्डा लिएर दिनभरी उभिरहँदा त्यसले केही नगरेको जस्तो देखिन्छ तर त्यो प्रहरी त्यहाँ उभिएकै कारण के के हुनबाट रोकियो त्यो हेर्नुपर्छ नी । अपराध रोक्नकै लागी त्यो प्रहरी खटिएको हो । अपराध रोक्न पुर्ण रुपमा प्रहरी खटिन्छ अब घटनानै घटिसकेपछि त झन अनुसन्धानमा खटिनै पर्छ । अब अपराध नियन्त्रणमापनि मानव इटेलिजेन्टनै हो सबैभन्दा महत्वपुर्ण अनुसन्धान भनेको । हामी अपराधै नहोस भन्ने चाहान्छौँ अपराध भइहाले त्यसको निराकरण छिटो भन्दा छिटो गर्नमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ । अस्ती टिकापुरमै एउटा घटना घट्यो कुकुर देखी प्रदेशसंग भएको श्रोत साधन जनशक्ती लगायत भएको सबै साधन र जनशक्तीको हामीले प्रयोग ग¥यौँ ।
मुख्य कुरा के हो भने सम्बेदनशिलताका साथ घटनाको किसिम हेरेर म आफैँ घटना स्थलमा अनुसन्धानमा खटिन्छु मेरो प्रहरी महानिरिक्षक ज्युबाटपनि त्यही निर्देशन भएको छ । सम्बेदनशिल घटना भए अनुसन्धानमा म आफै संलग्न हुन्छु । अर्को सवारी चाप बढेको छ यसको ब्यवस्थापनमापनि हामीले जोड दिएका छौँ । नागरिक अब्यवस्थापनपनि छ जिवनमा त्रास आतंक, बाढी पहिरोको आतंक, एउटा कल्भर्ट खोल्नकै लागी हामीले बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यसरी हामी ११ सय बढी इस्युमा काम गछौँ । यहाँले भनेजस्तै अपराध नियन्त्रणमा हाम्रो प्रयास अपराधै नहोस भन्ने हो अपराध भइहाले जसरीपनि अपराधिलाई कानुनी कटघरामा ल्याउनुनै हो कैलाली प्रहरीलेपनि पुर्ण प्रयास चाहीँ गरिरहने छ ।
कहिले काहीँ केही प्रहरीका कारण संगठन बदनाम हुने अवस्थापनि आउँछ दण्ड जरिवानाको ब्यवस्था यहाँ के हुन्छ ?
प्रहरी पेषाले गल्ती गर्दैन यो ब्यक्तीले गल्ती गर्ने हो । कोहीले गल्ती गरिहाल्छन्, प्रहरीमा मात्रै नभएर जुनसुकै क्षेत्रमा रहेका ब्यक्तीमापनि कोहीन कोह ीगलत निस्कि हाल्छ । प्रहरीले आचार सहिंतानै बनाएको छ एदी कसैले गल्ती गर्छ भने त्यसलाई कानुनी कार्वाही हुन्छ । मैले यहाँ आइसकेपछि मात्रै ८÷९ जना प्रहरीलाई कार्वाही गरिसकेको छु, यस्तै राम्रो गर्नेलाई पुरस्किृतपनि गरेको छु । संगठनलाई चुस्त दुरुस्त राख्नका लागी अनुसाशन बनाएका छौँ । जनशक्ती अनुसार कसलाई के जिम्मेवारी दिदा उपयुक्र्त हुन्छ यो बाँडफाँड गछौँ । नेपाल प्रहरीको कानुन, आचार संहिता बिपरित गएर काम गर्ने कार्वाहीको भागेदार हुन्छ ।
अन्तमा प्रहरीले कोभिड नियन्त्रणमा कसरी काम गर्यो र आउने दिनमा कसरी काम गर्छ ?
पहिलो चरणमा बाहिरबाट आउने नागरिकलाई नाकामा ब्यवस्थापन देखी क्वारेन्टाइन सम्म प्रहरीले काम गर्नुपरेको थियो । किनकी बाहिरबाटै आएर हामे देशमा संक्रमण बढेको हो । नाका ब्यवस्थापनमा मुख्य ध्यान दिनुपर्छ अब खोपका लागी त देशभरीकै सवाल हो जतिसक्दो चाँडो खोप लगाउन सके जोगिन्थ्यौँ । त्यसपनि समुदायमा ब्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसकापनि नागरिकनै सचेत बन्नुपर्छ हेर्नुस नागरिकले मास्कनै लगाउन छोड्नुभाछ अब १÷२ दिनपछि हामी मास्क नलगाउनेलाई कार्वाही गर्ने छौँ । आफ्नो शुरक्षा आफैले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त नागरिकले सोच्नुपर्छ नी ।
अब प्रहरीले क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन ब्यवस्थापन, होल्डिङ सेन्टर निर्माण लगायत नेपाल सरकारको निति नियम निर्देशन अनुसार प्रहरीले काम गरिरहेको छ । कैलाली जिल्लामा एउटा फरक अभ्यास गरिरहेका छौँ कोभिड संक्रमितका लागी कन्ट्याक सेन्टरनै खोलेका छौँ । संक्रमण भएका नागरिकलाई उहाँहरुको अवस्था बारे जानकारी र सुझाव दिएका छौँ । म के निबेदन गर्न चाहान्छु भने तेश्रो भेरियन्ट आउने निश्चित छ सबै बिज्ञले भनिराख्नुभएको छ । सरकारहरुले प्रयास गरिरहेका छन्, चाडबाड नजिकै आउँदै छन् यो बेला साबधानी न अपनाए फेरी भयाभह अवस्था आउन सक्छ आफ्नै सुरक्षा, परिवार र समाजको सुरक्षाका लागी सावधानी अपनाऔँ । नमाने हामीले बाध्य भएर कार्वाही गर्नै पर्छ ।